iPad: Akhristayaasha Martech waxay helayaan 3 bilood oo bilaash ah .bizMarketing Magazine | Martech Zone
iPad: Akhristayaasha Martech waxay helayaan 3 bilood bilaash ah .bizMarketing Magazine
Isniin, Janaayo 7, 2013 Khamiista, Oktoobar 31, 2013 Douglas Karr
Hadaadan akhrin .bizMarkinging weli kumbuyuutarkaaga iPad-ka, waa waqtigii! Waxaan jecel nahay inaan taageerno dhexdhexaadiyeyaasha kale ee dhiirrigeliya istiraatiijiyado waaweyn iyo waxbarista suuqleyda dhaqanka ugu fiican iyo talo adag. Bil kasta, waxaad ka heli doontaa maqaallo ka Martech Zone halkaas ayaa sidoo kale lagu wadaagay!
Daabacayaasha joornaalka .bizMarketing kordhiyay dalab VIP ah Martech Zone akhristayaasha si aad u hesho 3 bilood oo fasax ah sanadlaha ah!
bizMarketing Magazine waxay siisaa ganacsiyada khadka tooska ah iyo xirfadlayaal suuq geyn leh maqaallo kaladuwan oo kaladuwan oo loogu talagalay inay kaa ilaaliso inaad la socotid uguna dambaysa adduunka isbaddalaya ee suuqgeynta internetka. Arrin kasta oo bille ah, oo si gaar ah loogu daabaco iPad-ka wargeysyada 'iPad', waxaa ku jira xulashada qaar ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee laga heli karo khadka tooska ah, iyo sidoo kale maqaallo u gaar ah oo si gaar ah loogu qoray akhristayaashayada.
Marka lagu daro maqaalladaas macluumaadka, macluumaadka sida caadiga ah waxaa ka mid ah:
Wareysiyo xasaasi ah oo lala yeelanayo hogaamiyaasha suuq geynta
Jadwalka oo tilmaamaya dhacdooyinka soo socda & shirarka xiisaha u leh suuqleyda
Subscribe maanta joornaalka .bizMarketing!
Tags: bizmarketingmajaladda bizmarketingmajaladda ipad
Xayeysiinta Brand ma shaqeysaa?